DOWNLOAD Airbus A380 Falastiin Airlines FS2004 - Rikoooo
Halkan waa diyaarad inta badan la sugayay ee tayada leh qol ah 2d Quraanku falna sanyahay model 3D fiican marka loo eego freeware kale (ka 2005).
Airbus A380 waa double-sharraxaa, oo ballaadhkeeduna-jirka, afar-engine diyaarad jet ah soo saaray by shirkad Yurub Airbus, kabista ah EAD. Waa diyaarad ugu weyn dunida ee rakaabka iyo, sababtoo ah halka ay size, garoomada diyaaradaha badan ku qasbanaadeen in ay u cusboonaynta goobaha ay si habboon u meel. Markii hore la odhan jiray Airbus A3XX, diyaaradda waxaa loo qorsheeyay inay u tartamaan monoboli Boeing ee suuqa weyn-diyaaradda; A380 ka dhigay duulimaadkeedii ugu horeeyay on 27 April 2005 oo bilaabay adeegga ganacsi ee October 2007 la Singapore Airlines.
sagxad sare The A380 ayaa kordhiyay weheliyaan dhererka oo dhan sooctey, iyadoo u dhiganta a width diyaarad ballaaran-jirka ah. Tani waxay u ogolaaneysaa for qol ah A380-800 ee la 478 mitir oo laba jibbaaran (5,145.1 ft) ee dhulka qolku; 49% dhulka qolku ka badan diyaarad ku xiga ee ugu weyn, ee Boeing 747-400 la 321 mitir oo laba jibbaaran (3,455.2 ft), iyo waxay bixisaa fadhiga for 525 qof oo qaabeynta ah saddex-fasalka caadiga ah ama ilaa 853 qof oo gaadmada ah fasalka oo dhan-dhaqaalaha . The A380-800 duwan design kiilomitir 15,400 (8,300 nmi, 9,600 mi), oo ku filan inuu u duulo New York si Hong Kong, iyo xawaaraha ka saaciday inay ka mid Mach 0.85 (oo ku saabsan 900 km / h ama mph 560 at sare ka saaciday inay).
Sida of October 2012 ay jiraan lahaa amar adag 262 for A380 ah, kuwaas oo 89 loogu gacangeliyey. Amarka ugu weyn, waayo diyaaradda 90, waxay ahayd ka Emirates. (Source Wikipedia)